people Nepal » असार १४ गते भारी वर्षा हुने असार १४ गते भारी वर्षा हुने – people Nepal
असार १४ गते भारी वर्षा हुने
१० असार , काठमाडौं । बैशाख ३१ बाट जेठ ३१ हुँदै असार १४ को लागि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति तोकिँदा धेरैले सरकारको आलोचना गरे । मध्य वर्षातको समयमा चुनाव गराउने कस्तो अब्यावहारिक निर्णय गरेको होला ? त्यहि भएर हुनसक्छ शायद निर्वाचन आयोगले ९ गते शुक्रबार देखि दैनिक रुपमा मौसमको पूर्वानुमान रिपोर्ट आयोगमा पठाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
आम जिज्ञासा के हो भने असार १४ गते पानी पर्छ कि पर्दैन् ? विशेषगरी प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा । दुख पूर्ण नै भन्नुपर्छ, मौसमविद्हरुका अनुसार चुनावको दिन तीनवटै प्रदेशमा भिषण पानी पर्ने देखिन्छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् शान्ति कंडेलका अनुसार ‘प्रदेश नम्बर १ र ७ का धेरै स्थानहरुमा भारी वर्षा हुनेछ । उनका अनुसार त्यो दिन बिहानैदेखि पानी पर्दै रोकिंदै गर्छ । यसले निर्वाचनलाई नराम्ररी प्रभावित गर्छ ।’
आम मतदाताहरुलाई कँडेलको अनुरोध छ – ‘कृपया वर्षाको पानीबाट बच्ने उपायहरुको तयारी गरेर भोटहाल्न जानुहोला । निर्वाचन आयोगले पनि मतदानको दिन हुनसक्ने भारी वर्षाबाट कसरी जोगिने भन्नेबारे तयारीमा जुट्नुपर्ने उनको भनाई छ ।’
मनसुन शुरु भैसकेको र अब केहिदिन भित्रैमा सक्रिय हुने हुँदा आकाशे पानीको भरमा खेति गर्ने किसानले पनि रोपाईको तयारी थाल्दा हुने उनले बताइन् । उनका अनुसार यो वर्ष औषत वर्षा हुने देखिन्छ । तर, खडेरीका कारण धान रोपाईंमा नै समस्या पर्ने स्थिति भने नआउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।